Umenzi weNkqubo yeJacking | Umgangatho ophezulu kunye netekhnoloji ephezulu-Ngamandla onke
Ibhokisi yebhokisi kunye nokuCutha kunye neeMoto
Ibhokisi yeeGiya zezoLimo
Ibhokisi yeGeal Helical
Izixhobo kunye neeRacks, iTyathanga kunye neeSprocket
Ukonakala Bevel Gear
Indawo yokubeka izixhobo
Abembi bomngxunya weposi
Phendla Drive Shaft
Ixesha Belt Pulley
Ukuhlala kunye neeHub
Ipompo yeGesi yeVortex
Umatshini weMaski yobuso
Iindaba kunye neBhlog
Ezi zicwangciso ze-jacking okanye ukucwangciswa kungakhiwa kwiifomathi ezininzi ngokusebenzisa iibhokisi zebhokisi ze-bevel, iimoto, ukunciphisa iibhokisi zegiya, i-shafts yokuqhuba, ukudibanisa, iibhloko ze-plummer kunye nezixhobo zokulawula ukuhamba.
Ezine kulungelelwaniso olukhulu lwenkqubo iya kuba ngu-'H ',' U ',' T 'kunye' no'Ndilungiselele iinkqubo ze-jacking. Qaphela ukuba iijack screw ezininzi zinokudityaniswa ngokudibeneyo okanye ngombane. Okwesibini kuyanceda ukuba akukho sithuba sokudibanisa ishafts yedrive.
H-Uqwalaselo Inkqubo yeJacking
Inkqubo yokuQulunqwa kweJacking
Inkqubo yokuSetyenzwa kweT-T
U-Uqwalaselo Inkqubo yeJacking
Inkqubo yeJacking isebenza njani
Imveliso yesikere kulapho kuqhutywa khona isikere jack kwisymphony ukufumana intshukumo ethe ngqo. Ulungelelwaniso lwenkqubo yejack jack inokwaziwa ngokubanzi ngokuba yi "jacking system".
Ithuba lokudibanisa iirobhothi ezininzi kunye ukuze bahambise i-symphony yenye yeenzuzo zabo ezintle. Izicwangciso eziqhelekileyo zibandakanya ii-jacks zesikere, iibhokisi ze-bevel, iimoto, ukunciphisa iibhokisi zegiya, i-shafts yokuqhuba, ii-coupling kunye neebhloko zeplummer.
Iinkqubo zeJacking zineempawu ezimbini eziphambili:
Bayayivumela loo ntshukumo yemithwalo emikhulu eqhutywa yimoto enye, umz. 4 x ME18100 izikhonkwane zesikere ezihlelwe ngaphakathi kwenkqubo yesikere yokuhamba zinokuhambisa ii-400 Te (4000kN) ezininzi.
Imithwalo yenkxaso ngokulinganayo ngaphezu kwendawo enkulu, umz. 20Te umthwalo ongaphezulu kwendawo engama-24m2 usebenzisa ii-jack ezine-screw kunye ne-6m x 4m.
Ngokwesiqhelo iinkqubo ze-jacking zinxulunyaniswa phakathi kwezinto eziqhutywa ngaphakathi kwenkqubo nganye. Nangona kunjalo iinkqubo ezinxityelelaniswe ngamanani zinokufunyanwa. Ngexesha leesistim iijack screw ziqhutywa ngokukodwa kwaye zihambelane nenkqubo yolawulo lwe-elektroniki kunye ne-loop evaliweyo yempendulo. Oku kungandiswa ukuze kuqinisekiswe ukuba iinkqubo ezininzi zokuxhuma iirobhothi zilungelelanisiwe / zilawulwa ngokwamanani zivumela iindlela zokuhamba ngokuthe ngqo zokufumana izibonelelo kwisikali esikhulu.
Ivumele iiJack Power ukubonelela ngezisombululo zenkqubo yokuhluza kumacandelo amaninzi. Indawo yemveliso enokuba yeyesinyithi, eyasekuhlaleni, eyeemoto, eyephepha okanye yamandla iya kuba ngabona basebenzisi beenkqubo ze jacking nangona kunjalo izicelo zamabala emidlalo, unxibelelwano kunye nophando zikwasebenzisa iinkqubo zokwenza iijacking yoyilo olukhulu noluncinci.
Kungakhathaliseki ukuba isicelo seJacks Power sinokuqonda kunye namava aqinisekisa ukuba abathengi baya kufumana esona sisombululo senkqubo yokuhluza.
Singomnye wabavelisi abakhulu kunye nababoneleli eTshayina, Khetha abavelisi beMigangatho, abaXhasi, abaThumeli ngaphandle e-EVER-POWER.NET
Sigxininisa kwimveliso ye-Agricultural Gearbox, i-PTO Shafts, i-Sprockets, i-Fluid Coupling, i-Worm Gear Reducers, ii-Gears kunye nee-racks, ii-Roller Chains, i-Sheave kunye ne-Pulleys, ii-Gearbox zePlanethi, iiPley Pulleys, i-Shaft Collars kunye nokunye.
Malunga namandla onke
2001-2020 Iqela elinamandla onke
Le sayithi ikhuselwe ngu-RECAPTCHA kunye ne-Google umthetho wabucala kwaye Imiqathango yeNkonzo sicelo
Ulwazi olungentla lolokwabelana ngolwazi kunye nokwazisa iimveliso kunye nabavelisi. injongo engeyoyorhwebo. Wonke umxholo uvela kwinethiwekhi, inqaku liyimbono yethu, ukuba kukho nakuphi na ukophulwa kwelungelo lokushicilela okanye ufumene ulwazi oluchasayo, nceda unxibelelane nam, siza kuyicima kwangoko. Ukusetyenziswa kweenxalenye zokuqala zomenzi wezixhobo (ze-OEM) okanye iimpawu zorhwebo, umz. UJohn Deere® Comer Gearbox ® Bush Hog Gearbox® Omni Gear® njl. Inkampani yethu kunye neendawo ezibuyiselweyo ezibhalwe apha azixhaswanga, azivunywa, okanye zenziwe yi-OEM.
Ndimqhame Oku on ©